कसरी खुसी रहने ? यस्ता छन् केहि टिप्स - ज्ञानविज्ञान
व्यायामले मानिसलाई आनन्दित बनाउँछ । स्मरण शक्ति बढाउँछ । स्वास्थ्य मनोविज्ञान सम्बन्धी अध्ययनले दैनिक व्यायाम गर्ने मानिसहरुको शारीरिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआउँदा पनि उनीहरु असाध्यै खुसी र तनावरहित हुने देखाएको छ ।
ऊर्जाशील हुनुको एउटै उत्तम उपाय खुसी हुनु हो । खुसी मानिस निकै ऊर्जाशील हुन्छन् र जिन्दगीमा धेरै सफलतासमेत हात पार्छन्। नि:सन्देह हामी सबै खुसी हुन चाहन्छौँ। तर खुसी कसरी रहने त?
३. मस्त सुताइ
४. परिवार र साथीसँग रमाउने
६. अरुलाई सहयोग
ध्यानले एकाग्रता बढाउँछ। तनाव कम गराउँछ। मानिसलाई शान्त बनाउँछ। ध्यानले सकारात्मक ऊर्जासमेत बढाउने भएकाले ध्यान गर्ने मानिसहरु समेत खुसी हुन्छन्। ‘ध्यानले दिमाग स्वच्छ हुन्छ र तनाव पनि घटाउँछ,’ साउन एकर पुस्तक द एडभान्टेज अफ ह्याप्पिनेसमा लेख्छन् ।
Topics #खुसी #टिप्स
Don't Miss it डिम्पल नहुनेहरुले यसरी पनि बनाउँन सक्ने रहेछन् गालामा डिम्पल
Up Next सोचे भन्दा पुरानो निस्क्यो शुन्य, कार्वन डेटिङले भन्यो